Umthandazo kwingelosi yobuninzi Discover ➡ Discover Online ▷ ➡️
La Umthandazo kwingelosi yeNinzi, Iya kukunceda ubuphucule ubomi bakho, kuba ngumthandazo onamandla kakhulu apho kubuzwa khona ingelosi u-Abundia, olilungu elimangalisayo, kweli nqaku siza kukufundisa umthandazo wakhe onamandla.
1 Unokuba njani uMthandazo kwingelosi yeNinzi?
2 Umthandazo kwiingelosi zika-Abundia
3 Umthandazo wentabalala yezoqoqosho
4 Ngubani iNgelosi yokuTyeba?
Unokuba njani uMthandazo kwingelosi yeNinzi?
Kuya kufuneka sizilungiselele ngokwasemoyeni nangokwasemoyeni xa siza kuthandaza, umthandazo awugcini nje ngokucela into esiyifunayo, sihlala sicebisa ukuba sibulele ngento esiyifumeneyo kunye noko siza kukufumana. Ukunika umbulelo kwangaphambili kusivumela ukuba sizikhulule, sivule iintliziyo zethu, kwaye siqhagamshele ngokunyanisekileyo.
Kubalulekile ukuba wazi ukuba amaxesha omntu ayingawo amaxesha kaThixo, ke kufuneka sizingise ekufumaneni ingqalelo yabo kwaye bayazi ngokwenyani ukuba sicela ngentliziyo. Ngalo lonke ixesha sithandaza siyababeka, siyayizukisa iNkosi kwaye u-Abundia yingelosi esemsebenzini wabo, ngoko ke abacinywanga, akangomntu ozimeleyo kwizigqibo zakhe, nangona engummangaliso kwaye enokubakho Ukucela uThixo ukuba azive izicelo zethu.
Ukuqubuda phambi kwakho ndizifumana ndiyingelosi eninzi, wena unamandla kwaye kwangaxeshanye unobubele, siza phambi kwakho ngalo mhla ukucela kuwe intabalala enkulu. Sinokholo lokuba siya kuviwa kuba uyingelosi emamela abakhonzi bakaThixo kwaye siyazi ukuba ukunike amandla okusinika ubutyebi bakho. Sigcwalise ngobulumko, ukuzola kunye nobumbano ukuze sibe nazo kwaye sizalise iintliziyo zethu ngothando oluvela kuThixo ukuze sizifumane
Siyazi ukuba ubutyebi abuyonto yemali kuphela, ubutyebi bakho, ubuninzi be-Abundia, imalunga nezimvo, uthando, kunye neemvakalelo ezintle. Sinike intabalala, intabalala yokutya okusempilweni nasempilweni, sinike negolide kunye namatye axabisekileyo. Ugcwele intabalala Abundia, sifuna intabalala yovuyo, impumelelo, ukonwaba. Mamela kuthi Abundia kwaye makhe iwe imilambo kwiimpondo zakho zigcwele intabalala, ukuhamba kothando, usihlambe kuzo ukuze izandla zethu zizaliswe sisisa.
Ngokholo nothando oluvuthayo siwenza lo mthandazo kwaye sicela wena kwi-Abundia, ukuba usimamele ngomdla omkhulu kwaye ube nesisa kwaye usinike: (Yenza isicelo ngokholo). Siyabulela kuwe, zingelosi zintanda, ngokusizalisa ngobuchule bokwenza izinto, ngezicwangciso ezitsha kunye neeprojekthi, Enkosi kuba siyazi ukuba yonke into osinika yona isikelelwe nguThixo. Amen. Ekupheleni komthandazo kwiNgelosi yobuninzi kuyacetyiswa ukuba ukhanyise ikhandlela elimhlophe.
Umthandazo kwiingelosi zika-Abundia
Ingelosi yobuninzi, ndiyaguqa phambi kwakho ukuze ngamaphiko akho amnandi kwaye angcwele undamkele kwaye undikhusele kunye nosapho lwam ukuze usizi lungangeni ebomini bethu. Abundia bakho abathandekayo abagcwele intabalala, wena ongumqondiso wobutyebi, sukuvumela ikhaya lam ukuba libeneemfuno. Wena ondijongileyo kwaye ubone iimfuno zam, ndiyakucela ukuba undigubungele ngamaphiko akho angcwele, ugxothe ubuhlwempu kunye nesidingo kude nepropathi zam.
Gcwalisa iindlela zam ngobuninzi beentsikelelo, ukuze yonke into engeyiyo intabalala yothando, yempumelelo isuke kum. Susa amashwa kwaye undinike intabalala yamandla kunye nobulumko bokujamelana nawo kwaye ubalahle ngaphandle kobomi bam, ukuba beza kuzimela, ndingazikhusela. Ndinike intabalala yovuyo nempumelelo, ndiyathemba ukuba uyandimamela kwaye ndiyazi ukuba ngekhe ubalahle abo bakholelwa kuwe. Wena uyingelosi esikelelwe nguThixo, ndigcwalise ngentabalala yobutyebi, Amen.
Umthandazo wentabalala yezoqoqosho
Namhlanje ndizifumana phambi kokuba ndikubuze sithandwa seNgelosi yobuninzi, ndiza kukucenga ukuba ujonge kum ujonge indlela okusondele ngayo ukungabikho kobutyebi ebomini bam. Namhlanje ndithandazile ngokuthandaza kwiNgelosi yobuninzi ukuba bangenelele kwaye bayeke ukungabikho kobutyebi ebomini bam.
Ndiyakucela, ngelosi yobuninzi, ukuba undigcwalise ngobuninzi bokholo, intabalala yothando, intabalala yoxolo, intabalala yokunyamezelana, ukuba ususe ngoko nangoko uloyiko, umsindo, unxunguphalo ebomini bam kwaye undivumele ndiqhubele phambili kwaye woyise amaxesha anzima aphazamisa ubomi bam namhlanje.
Uyazazi iimfuno ezindongamele ixesha elide kwaye ndiziva ndidiniwe kukulwa, ke namhlanje ndiza kuwe ndizele lithemba, ndizele luthando ngawe ukuze undincede undisindise kwilishwa nakukungabikho kwempumelelo .
Ndidinga ngokungxamisekileyo ukuba undikhanyisele ngokukhanya okuvela kuThixo, undikhusele ngamaphiko akho angummangaliso kwaye ungandikhokela ukuba ndilungise into ekufuneka ndiyenzile, ukuba kule meko, ndiyakholelwa kuwe ukuba undincede ndilahle okwam ubunzima obundongameleyo. Ndincede ndikhululeke ematyaleni, iintlungu kunye nokungabikho kovuyo. Nceda, ngelosi yobuninzi, ungandishiyi kwaye umamele izicelo zam. Amen
Ngubani iNgelosi yokuTyeba?
I-Abundia, gama elo ibizwa ngalo ingelosi yobuninzi, ngamaxesha oothixo baseRoma wayedume njengothixokazi wethamsanqa, ukuchuma kunye nobutyebi. Ukuba uthixokazi othandekayo nohlonitshwayo ngexesha ekuhlawulwe ngalo imirhumo emikhulu. Umbala omele ingelosi yobuninzi yigolide kuba inxulunyaniswa nombala wegolide. Kuba unobutyebi obuninzi, uhlala emamela abo basweleyo, eyingelosi enesisa ngokwenene.
Ayaneli nje ukusinceda ukuba singawi okanye siphume elusizini, kodwa iyingelosi ekhuselayo, isibonelelo, sobulumko kutyalo-mali kwaye ithintela ubuninzi ekusetyenzisweni gwenxa. Ke, ingelosi yobuninzi ayiceli kuphela ukuba isinike ubutyebi bayo obuninzi, kodwa ikhusele nobethu.
Ukuba eli nqaku beliluncedo kwaye namhlanje sikufundise into entsha, siyakumema ukuba ukonwabele ukufunda amakhonkco esikucebisa apha ngezantsi: